Izikhungo Franchise - Amathuba weFranchise | I-Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Izinsiza Franchise
Okufakiwe Kwezinkonzo Franchise
Izinsizakalo Zokusebenza Kwamuva
I-Autobrite Direct Car Car Shop Shop
I-Autobrite Direct Franchise Uyemukelwa ku-Autobrite Direct Mobile Shop Franchise, ithuba elisha nelithokozisayo lokusebenzisa ...
I-Damp Detential Franchise Opportunity Damp Detential yaqalwa nguRobert Horne ngonyaka we-2009. Ukunikeza inhlolovo yokubumba nokubumbeka kwe ...
IBridgewater Homecare Franchise
I-Bridgewater Home Care Franchise izokunikeza ithuba lokwakha ibhizinisi lakho eliphumelelayo ekukhuleni ngokushesha, njalo ...
I-DNS Accountants Franchise Yakha ikusasa lakho nge-DNS Accountants Franchise nebhizinisi lakho nethuba lethu eliqinisekisiwe. Nge ...
I-Franchise Yezinsizakalo Ezihle
Joyina Izinsizakalo Ezihle futhi uqale ibhizinisi lokunakekelwa kwekhaya endaweni oyithandayo Izinsizakalo Ezihle yinkampani yomhlaba wonke, ...
I-punctureSafe Franchise Iyathengiswa - Ukuvikelwa KweTiro Okuphelele
Izipesheli zePuncturesafe Franchise - Izindleko Nezindleko Zesitoko Kuphela Iphakheji Yokuvikela Ilayisense Eyisisekelo Yezwe Elisebenza Ku ...
Isidingo sezinsizakalo zomuntu uqobo emhlabeni jikelele akukaze kube ngaphezulu. Ngakho-ke nemboni ekhulayo kungenzeka ucabange ukuthenga ithuba lokuhlobene nezinsizakalo ezihlobene nezinsizakalo.
Yiziphi izinhlobo zamasevisi ezenziwa?
Sinezinhlobonhlobo ezahlukene zezinsizakalo zomuntu siqu ezitholakala eFranchiseek kufaka phakathi ukucoca ama-franchise, ama-franchise wokunakekela, ama-franchise wokuthuthukisa ekhaya nokunye okuningi. Ngakho-ke sizoklelisa ngokushesha izibalo ezungeze lezi zimboni ukukunikeza ukuqonda okufushane kokukhula kwabo.
Umkhakha Wokuhlanza: Imboni yokuhlanza ibilokhu inyuka ngokushesha emkhakheni wezinsizakalo zabantu iminyaka eminingi manje emazweni amaningi. Futhi eminyakeni edlule i-UK ngokwesibonelo ibone ukwanda okuzinzile kakhulu kwezinsizakalo ezinjengale.
Kusukela ngonyaka ka-2010 umkhakha wokuhlanza ubone ukwanda kwemali engama-21% e-UK kuphela.
Kunamabhizinisi angaphezu kuka-23,000 e-UK anikezela ukuhlanza izakhiwo njengokuhlanza ihhovisi njll.
Usayizi wemakethe ophelele e-UK ubiza amakhilogremu amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisithupha.
Umkhakha Wokunakekela: Njengoba amathemba okuphila esanda ngenxa yesimangaliso sobuchwepheshe besimanje kungahle kubonakale kuyinto enhle. Kepha lokhu futhi kusho ukuthi abantu asebekhulile bazodinga usizo olwengeziwe futhi banakekele yingakho imboni yezokunakekelwa ikhule kakhulu.
Umkhakha wokunakekela uletha u- $ 7.8 billion emnothweni wase-UK unyaka nonyaka
IHhovisi Lesibalo Sikazwelonke libikezela ukukhula okungama-36% kubantu abaneminyaka engama-85+ phakathi kuka-2015 no-2025, kusuka kwizigidi eziyi-1.5 kuye ezigidini ezimbili.
Ngo-2018 bangaphezulu kwezigidi ezingama-7 abantu lapho baqashwa khona embonini yokunakekela e-US kuphela
Umkhakha Wokuthuthukiswa Kwekhaya: Sonke siyazi ukuthi siyazithanda izindlu zethu ukuthi zibukeke zilungile yingakho sichitha isikhathi nemali yokuhlanza nefenisha entsha ukuyenza ibukeke kahle kakhulu kodwa bewazi?
ngokusho kwe-NAEA sichithe imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 41 ekwakheni kabusha izindlu eminyakeni engu-5 edlule e-UK.
$ 394B. inani ukuthuthukiswa ekhaya ukuthengisa e-US ngonyaka we-2018.
$ 680B. imali engenayo ye-DIY ukuthuthukiswa ekhaya imakethe ngo-2025.
Kubonisani lokhu emkhakheni wezinsizakalo?
Njengoba ubonile kulezi zibalo zonke lezi zinsizakalo zokwelashwa ngazinye nokwelashwa konke kufaka isandla emkhakheni wezinsizakalo zomhlaba. Ngakho-ke njengoba ubona kuwo wonke la mabhizinisi anikela ngomkhakha wezinsizakalo zomhlaba wonke ukhula ngokuqinile okukhombisa ukuthi leli yithuba elihle futhi nemboni ethokozisayo yokujoyina. Ngakho-ke ulindeni? Bheka ezinye zezinsiza zethu eFranchiseek namuhla ukuthola ithuba lakho lamaphupho.
Amakethe weShutter Franchise Amathuba akhulayo, utshalomali oluphansi uhlobo lomkhiqizo onothando lwangempela lwamakhasimende. I-Just Shutters Franchise inikeza okungafani…